Kangana Ranaut goob bulsha ah ay dharka ku bedelatey Xilli Ay Filimka Rangoon Duubeesay oo la hadal hayo. - iftineducation.com
Kangana Ranaut goob bulsha ah ay dharka ku bedelatey Xilli Ay Filimka Rangoon Duubeesay oo la hadal hayo.
aadan21 / October 26, 2016
iftineducation.com – Atirishada caanka ah ee ku guuleesatay National Film Award iyo Filmfare Award Kangana Ranaut ayaa la sheegay inay dharka ku badalatay dhagax ama jamal gadaashiisa xili ay filimka Rangoon duubeesay.
Kangana Ranaut ayaa wareysi siisay atirishada Neha Dhupia xili ay marti ku ahayd barnaamijka dhageysiga ee lagu magacaabo No Filter Neha ee Neha Dhupia xariiriye ka tahay.
Kangana Ranaut ayaa sheegtay in filimka Rangoon ee Director Vishal Bhardwaj iska leeyahay lana jilayaan Saif Ali Khan iyo Shahid Kapoor ay ku duubeen filimkaan meel aan laga helin adeega muhiimka ah jilaayaasha u baahan yihiin.
Filimka Rangoon inta badan waxaa lagu duubay dhulka buuraha ah ee xuduuda Hindiya iyo China u dhaxeyso sidaa darteed Kangana Ranaut waxay weesay meel ay dharka isaga badasho sidaa darteed dhagax waa weyn oo jamal ah oo halka filimka lagu duubayay ah ayay dharka isaga badashay!!
Kangana waxay tiri “Marka aad ka baxdid meel agab walbo laga heli karo kuna qabsato daruuf aadan ka fursan karin waxaad ku qasban tahay inaad sameysid wax walbo”
“Sidaa darteed markii aan duubeenay filimka Rangoon oo aan juugnay miyiga Arunachal Pradesh xitaa aqalo halkaas kuma oolin sidaa darteed dhagax waa weyn gadaashooda ayaan marwalbo dharka ku badalanayaay!”
“Kaligey ma ahan qof walbo ayaa sidaas sameenayay xitaa Shahid Kapoor waayo meel kale oo dharka lagu badasho ma laheyn kaliya dhagax (Jamal) weyn hoostiisa ayaa lagu dhar badalanaayay”
Filimka Rangoon ee Kangana duubistiisa dhibaatada ka martay waxaa daafaha caalamka laga daawan doonaa 24-ka Febraayo 2017.
ORAAH MACAAN: Gabar kala shabisa Ragga
Kareena Kapoor oo shaacisey Filimka ugu Wanaagsan ee uu Karan Johar Sameeyay.